ဘုရား သော်မှ ငြင်းမရ... ~ ဒီမိုဝေယံ
ဘုရား သော်မှ ငြင်းမရ
၂၉.၅.၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် သာကေတမြို့နယ်၊ ဇိနမာရ်အောင်စေတီတော်အနီးရှိ ဗဟိုရ်စည်ကျောင်း၏ ပဓာန နယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရ သက်တော် (၆၉)နှစ်၊ ၀ါတော် (၄၉)၀ါ၏ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနားကျင်းပရန်အတွက် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသားများသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော နိဗ္ဗာန်အထူးယာဉ် ကြီးဖြင့် သွားရောက်၍ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလပ်တော်အား ပင့်ဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်သို့ သယ်ဆောင်ကူညီ ဖေးမခဲ့ကြသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော အထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ် ကြီးနှင့် အခြားနိဗ္ဗာန်ယာဉ်များအား အသင်းရှိမော်တော်ယာဉ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များသည် နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆီ၊ ရေ၊ မီး စသဖြင့် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စက်ပြင်အဖွဲ့အား စစ်ဆေးမှုများ ခိုင်းစေ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ယခု သာကေတမြို့နယ်၊ ဇိနမာရ်အောင်စေတီတော် အနီးရှိ ဗဟိုရ်စည်ကျောင်း၏ ပဓာန နယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရ သက်တော် (၆၉)နှစ်၊ ၀ါတော် (၄၉)၀ါ၏ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနားသယ်ဆောင်ရာ လမ်းကြောင်းတွင် ယင်းအထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်ကြီးမှာ စက်ချို့ယွင်း၍ ထိုးရပ်သွားတော့သည်။ ထို့ကြောင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်၍ အထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ် နောက်တစ်စီးအား အမြန်လာရောက်ပို့ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ရတော့ သည်။ ထပ်မံ၍ ရောက်ရှိလာသော အထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပေါ်သို့ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလပ်တော်အား ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ ပင့်ဆောင်၍ ရေဝေးသုဿန်သို့ သယ်ဆောင်ကာ အန္တိမဈာပန မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဘုရား သော်မှ ငြင်းမရ … မင်းကဘာမို့လဲဟု … အမြဲဆင်ခြင်နေလိုပါသည်။ (သုခ)
ယင်းဖြစ်ရပ်သည် သက်ရှိလူသားများတွင် မည်မျှပင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝ ကြွယ်ဝ၊ မည်မျှပင် တန်ခိုးအာဏာရှိ ရှိ၊ မည်မျှပင်ကျန်းမာရေးကို လိုက်စား လိုက်စား . . . နောက်ဆုံး၌ အနိစ္စတရားအား မလွန်ဆန်ပေ။ ထို့အတူ သက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများသည်လည်း မည်မျှပင်ခေတ်မီ ခေတ်မီ၊ မည်မျှပင် နည်းပညာတိုးတက် တိုးတက်၊ မည်မျှပင် အကြမ်းခံ ခံ၊ မည်မျှပင်ထိန်းသိမ်း ထိန်းသိမ်း . . . နောက်ဆုံးတော့ ပျက်စီးယိုယွင်းရမည်မှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်တော့သည်ဟု မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သံဝေဂ ရမိပါတော့သည်။